आज कुन–कुन नदीमा बाढी आउने सम्भावना छ ? - Everest Dainik - News from Nepal
आज कुन–कुन नदीमा बाढी आउने सम्भावना छ ?
काठमाडौं, असार २३ । बाढी पूर्वानुमान महाशाखाले सोमबार बाढी आउने सम्भावित खोला नदीबारे जानकारी दिँदै सजग रहन सल्लाह दिएको छ।
महाशाखाका अनुसार आज मेची, विरिङ, निन्दालगायत झापा, मोरङ, सुनसरी, यलामबाट बहने साना नदीहरू केहीमा बहाव सतर्कता तह सम्म पुग्नसक्ने सम्भावना छ । यस्तै सुदूरपश्चिम, गण्डकी प्रदेश, प्रदेश ३, २ र १ को पहाडी र चुरेबाट बहने केही ससाना नदीहरूमा समेत आकस्मिक बहाव हुने सम्भावना रहेकाले सतर्कता अपनाउन महाशाखाले आग्रह गरेको छ।
याे पनि पढ्नुस प्रहरीको सुरक्षामा खुलाइयो वीर अस्पतालको ओपिडी टिकट काउन्टर
ट्याग्स: Kathmandu, rain